Ogaden News Agency (ONA) – Warsaxaafadeed Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya Soo saartay
Warsaxaafadeed Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya Soo saartay
Ciidamo Gumeysiga Ethiopia Xoog Ku Qoranayaan Si loogu xasuuqo Shacabka Ogadeniya iyo Ethiopia
Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa soo saartay warsaxaafadeed ay u qaybisay Saxaafada Caalamka Taariikhdu markay aheyd 26/07/2013. Warsaxaafadeedkan ayaa Jabhadu ku sheegtay in Ciidamada Gumeysiga Ethiopia ay ciidamadooda ku daabuleen Xuduudka Sudan Iyo Itoobiya Goobta laga sameeyay Dhaamka Wabiga Abbay (Blue Nile) Ciidamadan ayaa laga soo qaaday Dhulka Ogadeniya iyo Somalia si ay dhoolo tus daggaal ugu sameeyaan diyaar garowga ay ugu jiraan inay Diyaar u yihiin Daggaal ay Dowlada Masar kusoo qaado Biyo Xidheenka weyn ee Ethiopia dhisanayso.
Jabhada ayaa sheegtay in Ciidamda Ethiopia ay qoranayaan ciidamo iyaga oo si qasab ah shacabweynaha ku amraya inay ciidan qortaan. Goobaha Ciidankan Xooga looga qorayo ayaa waxaa kamid ah dhulka Ogadeniya oo amar lagu bixiyay in dhulkaas laga soo arruuriyo Ciidamo waxaa kale oo arrintan ay ka jirtaa bartamaha Ethiopia iyo gabi ahaanba dhulka Ethiopia oo lagusoo waramayo in ciidamo gumeysiga Ethiopia ka qoranayaan.
Jabhada ayaa caalamka ku baraarujisay in gulufkan ciidanka gumeysiga Ethiopia aywado uu yahay Xasuuq Hor leh oo ay ka bilaabayso Dhulka Ogadeniya iyo Ethiopia. Gumeysiga Ethiopia waxa kale oo Ciidankan u adeegsanaysaa sidii ay xoog ugu muquunin lahaayeen Xoriyad Doonka iyo shucuubta Ethiopia ee isbadal doonka ah.
Jabhada ayaa Warsaxaafadeedkan ku sheegtay In ciidamada Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya isu taagi doonaan kana hortagi doonaan iskudayga Gumeysiga Ethiopia ee uu shacabka Ogadeniya rabo innuu ku xasuuqo.
Jabhada ayaa ugu baaqday Beesha Caalamka ee daneynaysa ilaalilnta Xuquuqda Aadamaha inay usoo gurmadaan shacabka Ogadeniya ee ku hoos jira Gumeysiga imperaadoriyada ku dhisan baryootanka mucaawamada deeqaha ah iyo kaalmada horumarineed kaalmooyinkaas oo ay ku xasuuqaan shacabka aan isdifaaci karin.